Update: Xiisad dagaal oo ka jirta deegaanno ka tirsan G/Sool iyo Wararkii ugu dambeeyay – HalQaran.com
Boocame (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Boocame ee Gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan in ay ka jirto xiisad dagaal oo u dhaxeysa Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad hubeysan oo taageersan Somaliland.
Wararka ayaa sheegaya, in xiisadaan ay timid, kaddib markii duleedka magaalada Boocame ee Gobolka Sool, ay isku aruursadeen maleyshiyaad hubaysan, kuwaas oo doonaya inay magaalada Boocama kala wareegaan Ciidamada Puntland.
Dadka Magaalada Boocame ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen inay si weyn maanta u dareemeen xiisadda dagaal ee u dhaxeysa Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka hubeysan ee taageersan Somaliland.
Weli kama aysan hadlin saraakiisha Ciidamada Puntland ee Gobolka sool xiisada dagaal ee u dhaxeeysa Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka hubeysan.
Si kastaba, waxaa xusid mudan deegaanno ka tirsan gobolka Sool ay horay ugu dagaallameen Ciidamada Somaliland iyo Puntland, iyaga oo weli isku hor-fadhiya deegaanka Tukaraq ee Gobolkaasi Sool.
Tags: magaalada Boocame, Puntland, Somaliland, Xiisad dagaal oo ka taagan gobolka Sool